Ndinofanira Kutaura Nevabereki Vangu Sei?
MUBVUNZO 1 Ndiri Munhu Akaita Sei?
MUBVUNZO 2 Nei Ndichinetseka Nezvakaita Muviri Wangu?
MUBVUNZO 3 Ndinofanira Kutaura Nevabereki Vangu Sei?
MUBVUNZO 4 Ndingaita Sei Kana Ndakanganisa?
MUBVUNZO 5 Ndoita Sei Kana Vamwe Vachindinetsa Kuchikoro?
MUBVUNZO 6 Ndingaita Sei Kuti Ndisafurirwa?
MUBVUNZO 7 Ndingaita Sei Kana Ndichinzi Ndiite Zvepabonde?
MUBVUNZO 8 Ndodii Kana Ndashungurudzwa Panyaya Dzepabonde?
MUBVUNZO 9 Ichokwadi Here Kuti Takabva Kumhuka?
MUBVUNZO 10 Bhaibheri Ringandibatsira Sei Muupenyu?
SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Arabic Armenian Assamese Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kannada Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mhinduro 10 Dzemibvunzo Yevechiduku
NEI UCHIFANIRA KUZVIZIVA?
Kana uchiwirirana nevabereki vako, zvinhu zvinokufambira zvakanaka muupenyu.
Chimbofungidzira izvi: Manheru emusi weChitatu. Taku uyo ane makore 17, apedza mabasa ake epamba uye ava kuda kuzorora! Anobatidza TV obva anyura musofa.
Achingoti garei, baba vake vanobva vamira padhoo vachiratidza kusafara nazvo.
“Takudzwa! Uri kutoona hako TV pane kuti ubatsire munin’ina wako homework! Sei usingateereri?”
“Haa akomana,” Taku anodaro achiridza tsamwa zvekuti baba vake vanozvinzwa.
Baba vanoswedera padhuze vomuti, “Wati kudii?”
“Hapana,” anodaro Taku achiratidza kuti haasi kutombofara nazvo.
Iye zvino baba vacho vagumbuka. Nehasha vanobva vamuti, “Handina zera newe, wazvinzwa!”
Dai uriwe Taku, ungadai waita sei kuti musazosvika pakupopotedzana?
Kutaura nevabereki vako kwakafanana nekutyaira motokari. Kana ukaona kuti mugwagwa wakavharwa unogona kutsvaka imwe nzira.
Mumwe musikana anonzi Leah anoti, “Zvinondiomera kutaura nababa vangu. Dzimwe nguva pandinenge ndichitaura navo unonzwa voti, ‘Sori wanga uchitaura neni here?’”
LEAH ANE ZVINHU 3 ZVAANOGONA KUITA.
Kupopotera baba vake.
Leah anopopota achiti, “Muri kumboiteiko! Saka pese apa ndanga ndichitaura ndega!”
Kurega kutaura nababa vake.
Leah anobva aramwa orega kuvaudza dambudziko rake.
Kumirira nguva yakanaka, ozotaurazve nyaya yake.
Leah anozotaura nababa vake kana kuti anozonyora tsamba achirondedzera dambudziko rake.
Ndezvipi zvaungati Leah aite?
FUNGA IZVI: Baba vaLeah vane zvavanga vachifunga saka havana kuona kuti mwana wavo ane zviri kumunetsa. Saka Leah akaita zviri paA, baba vake vanogona kushaya kuti zviri kubva nepi. Izvi zvichaita kuti vasamuteerere, uye zvinotoratidza kuti haavaremekedzi. (VaEfeso 6:2) Saka kuita izvi hakuna zvakunobatsira.
Unogona kutsvaka imwe nzira yokuti utaure nevabereki vako sezvawaizoita kana ukaona kuti mugwagwa wakavharwa
Kuita zviri paB kungaita senge kuri nyore, asi hakuna kunaka. Nemhaka yei? Nekuti kana Leah achida kubatsirwa pane zviri kumunetsa, anofanira kutoudza baba vake kuti vazive. Kunyarara hakuna zvakunogadzirisa.
Asi akasarudza zviri paC, zvichareva kuti achatsvaga dzimwe nzira dzekuti ataure nababa vake. Achanyatsotsvaga nguva inenge yakakodzera. Uye kana akafunga zvekuvanyorera tsamba, zvichaita kuti asaramba achinetseka.
Kunyora tsamba kunogona kumubatsira kuti anyatsotaura zvese zviri pamwoyo. Baba vake pavachaiverenga vachaona zvaanga achiedza kutaura uye zvichaita kuti vakwanise kuzomubatsira. Kuita zviri paC kunobatsira vese vari vaviri. Kana akataura navo kana kuti akanyora tsamba, anenge agona nekuti Bhaibheri rinoti tiite “zvinhu zvinoita kuti pave norugare.”—VaRoma 14:19.
Ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa naLeah?
Nyora zvawafunga zvaangaita. Wozonyora zvazvakanakira.
“Kudza baba vako naamai vako.”—VaEfeso 6:2.
“Kutaura kwenyu ngakuve nenyasha nguva dzose.”—VaKorose 4:6.
‘Kurumidza kunzwa, unonoke kutaura, unonoke kuva nehasha.’—Jakobho 1:19.
JEKESA ZVAURI KUREVA
Yeuka kuti zvaunotaura nezvinofungwa nevabereki vako kuti ndizvo zvauri kureva zvinogona kusiyana.
Vabereki vako vanogona kukubvunza kuti sei wakangoti kwindi. Wobva wati, “Handisi kuda zvekutaura.”
Vabereki vako vanogona kunzwa seuri kuti: “Hazviiti kuti ndikuudzei. Ndichaudza shamwari dzangu kwete imi.”
Ngatitii une chimwe chinhu chiri kukunetsa uye mubereki wako oti anoda kukubatsira. Asi iwe wobva wati: “Regai henyu, ndichaona kuti ndoita sei.”
Vabereki vako vanogona kunzwa seuri kureva kuti kudii?
Zviri nani kuti uvapindure uchiti kudii?
Pandichanzwa ndisiri kuda zvekutaura nevabereki vangu, zvii zvandichaita?
Kana mubereki wangu akandimanikidza kutaura imwe nyaya yandisiri kuda zvii zvandichaita
Ndingaita Sei Kuti Ndiwirirane Nevabereki Vangu?
Ungataura Sei Nevabereki Vako Nezvemitemo Yavanokupa?